Ugari neInvestment yeMoldova uye Golden Visa
Isu tinopa Ehupfumi Kuenda Kunoshanda Services muMoldova ye:
● Kugara nekudyara muMoldova
● Ugari nekudyara kubva kuMoldova
● Visa yegoridhe muMoldova
● Pasipoti yechipiri kubva kuMoldova
● Ugari nekudyara kuMoldova nekudyara muzvivakwa
Best Vamiriri veCitizenship neInvestment muMoldova uye Magweta e Citizenship kubudikidza Investment muMoldova uye nevaichinja kuti real estate Citizenship zvirongwa muMoldova vanoshanda pamwe chete kuchengetedzwa kwevatengi.
Citizenship neInvestment vamiririri veMoldova vanopa masevhisi ekugara nekudyara muMoldova, Citizenship nezvirongwa zvekudyara muMoldova, Citizenship nehurongwa hwekudyara muMoldova, wechipiri Ugari nekudyara muMoldova, Citizenship huviri nekudyara muMoldova, ugari uye ugari nekudyara muMoldova , Citizenship inogara nekudyara muMoldova, Citizenship kwenguva pfupi nekudyara muMoldova, Citizenship nehurongwa hwekudyara muMoldova, Citizenship nehurongwa hwekudyara muMoldova, Residency nekudyara muMoldova, Residency nezvirongwa zvekudyara muMoldova, Residency nehurongwa hwekudyara muMoldova, wechipiri Kugara nekudyara muMoldova, huviri Kugara nekudyara muMoldova, pekugara uye ugari nekudyara muMoldova, ugari uye ugari nekudyara muMoldova, zvirongwa zvehupfumi zvehupfumi muMoldova, Residency nehurongwa hwekudyara muMoldova, Residency nezvirongwa zvekudyara muMoldova, wechipiri pasipoti muMoldova, yechipiri pas zvirongwa zvemitambo muMoldova, chirongwa chechipiri chepasipoti muMoldova, pasipoti yechipiri muMoldova, pekugara uye yechipiri pasipoti muMoldova, pasipoti yechipiri yekudyidzana muMoldova, pasipoti yechipiri nekudyara muMoldova, pasipoti yechipiri yevagari vemo muMoldova, yechipiri pasipoti chirongwa muMoldova, chechipiri zvirongwa zvepasipoti muMoldova, vhiza yegoridhe muMoldova, mavhiza endarama muMoldova, zvirongwa zvendarama vhiza muMoldova, chirongwa chendarama vhiza muMoldova, chechipiri vhiza vhiza muMoldova, chechipiri vhiza vhiza chirongwa muMoldova, mbiri yegoridhe visa muMoldova, ugari uye vhiza yegoridhe kuMoldova, kugara uye vhiza yegoridhe muMoldova, mugari wevisa wevisa muMoldova, chirongwa chendarama vhiza muMoldova, zvirongwa zvegoridhe zvevisa muMoldova.
"1 mira mhinduro" kune yako yese Citizenship nekudyara muMoldova nerumwe rutsigiro.
Minimum Investment muMoldova yeU Citizenship nekudyara: EUR 100,000
Nhanganyaya Moldova uye Citizenship neInvestment
Dzidza zvakawanda nezveMoldova
Moldova, nyika iri mukona yekuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kwenzvimbo yeBalkan muEurope. Guta rayo guru ndiChisinau, iri munzvimbo yekumaodzanyemba inotarisana nenyika. Pane imwe nguva munguva yakapfuura inozivikanwa seBessarabia, iyi nharaunda yaive chikamu chakakosha chenharaunda yeRomania yeMoldavia kusvika 1812, payakapihwa kuRussia nesuzerain yayo, mutongi weUtoman Empire. Bessarabia yakaramba iri nzvimbo yehumambo hweRussia kusvika mushure meHondo Yenyika I payakashanduka kuita chidimbu cheGreater Romania, uye ikadzokera mukutonga kweRussia muna 1940-41 uyezve mushure meHondo Yenyika II payakabatanidzwa kuchikamu cheimwechete mu dunhu rekuUkraine rapfuura, Moldavian Autonomous Soviet Socialist Republic, kumahombekombe ekuruboshwe eDniester River kuti igadzire Moldavian Soviet Socialist Republic.
Iyo Republic of Moldova inyika yakakomberedzwa, yakarongedzwa pakati peRomania neUkraine. Rudzi rwacho runogara zvachose irwo rudzi rwusina mufaro, rwuchinyatsovimba nezvinhu zveRussia. Kunyange zvakadaro, hurombo huri kudzikira pamwero usingachinji. Mune zvirimo pazasi, akanakisa gumi chaiwo enzvimbo nezvezuva nezuva nharaunda muMoldova dzinounzwa.
Moldova inowanzo kuve nyika diki uye ine vangangoita mamirioni 3.5 vagari. Chiyero chimwe chinokanganisa kwemaonero ayo akadhirowewa ndeyekusajeka kwekuvandudza huwandu hwevanhu - 1.06 muzana.
Moldova inosangana nechishamiso chinonzi "mind chiteshi", iyo inokanganisa nyika zhinji dzisiri-maindasitiri kutenderera pasirese. Nyanzvi dzakapihwa mune imwe nyika ine inorambidzwa kuvhurwa kwemabasa vanoenda, vachiramba imba yavo yenyanzvi nyanzvi. Sezvinoratidzwa naDeutsche-Welle, zvinoonekwa kuti yega yega yechina yeMoldova inoshanda kunze kwenyika, nevazhinji vachishandisa kuve nehukama hweRomania zvakapetwa, zvichiita kuti vakwanise kushanda muEuropean Union yose.
Nenharidzano chinangwa chekubata huwandu hwakawanda hwevashandi vayo vane zvipo, zvese nzvimbo yakavanzika uye hurumende yeMoldova vari kuisa zviwanikwa muiyo nyowani yekutanga dhizaini. Kunyangwe paine chokwadi chekuti iyi inogona kunge iri indasitiri inopinza, kuunganidza tekinoroji inogonesa mamiriro ekunze ebhizinesi kunofanirwa kubatsira Moldova nekubata nyanzvi dzehunyanzvi, sekungobatanidza nehupfumi hweWestern.
Mikova yakavhurika yemari muRustic Moldova inongotenderedzwa kubhizimusi rezvekurima, iine nzvimbo dzinobhadhara dzakazara munzvimbo dzemaguta, semuenzaniso, guta guru Chisinau.
Urongwa hweMoldova hwehutungamiriri hwakafambira mberi zvakanyanya kubva parusununguko kubva kuUSSR. Chokwadi, kusvibiswa kuri kuenderera, zvisinei, Moldova seyekupedzisira yakawana "yakasununguka" kuongororwa kubva kuFreedom House International. Zvakare, nyika yakabvumirana neChirongwa Chemubatanidzwa neEU, zvichireva vimbiso yeshanduko yemari nezvakatarisirwa nekutengeserana kukuru kunoitisa mubatanidzwa.
Zvinotoshamisa kuti huwandu hweruzhinji rwevanhu rwakaderera kubva pa68 muzana muna 2000 kusvika pa11.4 muzana chete muna 2014.
Dzidzo yakakosha inosungirwa muMoldova. Chikoro chepuraimari chinosanganisira ongororo yekutanga kusvika yechina, uye chikoro chebetsero chakakamurwa kuita chepamusoro uye chepamusoro mamakisi ekudzidzira mashanu kusvika pfumbamwe, uye 10 kuburikidza ne12 mumwe nemumwe. Nema sekondari kutora chikamu kwemitengo uye ingangoita 100% hunyanzvi hwehuwandu, fomati yekuchikoro yeMoldova ine zvese zvinoratidza kuti inoshanda zvakanyanya.
Nyika ine dambudziko rakakura rezvekurapa. Iyo yakajairika yeMoldova inodya 18.22 marita ehwa isina kusvibiswa gore rega, kutenderera kakati wandei pasi rose zvakajairwa zve6.1. Iyi nhanho yekushandisa doro pamwe inowedzera kurudzi rwenyika zvine mwero tariro iri makore 67.4 yevakomana, uye 75.4 yevakadzi.
Zvekutanga ruzivo rwe Citizenship neInvestment yeMoldova
Chishoma kudyara kwe Citizenship nekudyara muMoldova
Mari yekuwedzera ye yendarama vhiza ye Morodhovha
Citizenship nekudyara kweMoldova
Processing nguva yeU Citizenship nekudyara kweMoldova
Makore mashanu ekuchengetedza chinzvimbo chake chenguva pfupi
Ugari Hwenyika Hwakabvumidzwa kuvagari veMoldova
Investment Sarudzo dze Ugari nekudyara kweMoldova
Nei uchienda kuCitizenship nekudyara kweMoldova
Moldova iri muEastern Europe. Iyo nyika inotengesa kunze waini, nepo kurima kwayo uye indasitiri yezvikafu iri zvakare yakakosha. Iyo ine hupfumi hunokurumidza kukura, iyo inopa yakawanda mikana yemabhizinesi. Zvakangodaro, iyo yekudyara mamiriro ekunze haisi iyo yakanyanya kunaka, uye zvakakosha kutaura kuti mutero wekambani iri 18%.
Mhuri inopinda muMoldova
Iwe nenhengo dzako dzemhuri dzepedyo munofanira kunyorera pamwechete. Izvi hazvireve chete mukadzi / mukadzi wako uye vana vari pasi pezera, asi vese vana vanovimba vari pasi pemakore makumi maviri nemapfumbamwe, uyezve vabereki vako vanovimba vane makore ari pamusoro pe29.
Citizenship Nehurongwa hwekudyara muMoldova insite
Nemabatiro ayo emwedzi-mitatu ekunyorera, chirongwa cheMoldova chekudyara chizvarwa chinoonekwa seimwe yeanokurumidza zvirongwa. Pamberi pechikumbiro, iwe (uye nhengo dzemhuri yako dzese dzinonyorera pamwe newe) uchakumbirwa kuti upe mari isingadzosere kuPublic Investment Fund yeMoldova. Kana wawanikwa unogamuchirwa, unogona kunyorera kuve mugari weMoldova - iwe nenhengo dzemhuri yako muchave nekodzero dzakaenzana sevamwe vese vagari vemuMoldova.
Mari inodiwa yeMoldova
Mari yechirongwa inoumbwa nezvinhu zvinoverengeka zvakasiyana. Kune munhu mumwe chete anonyorera, mari shoma ndeye USD146,300; yemhuri ine vanhu vashanu, icharamba ichidhura isingasviki USD5. Izvi zvinoita kuti ive imwe yeEuropean hupfumi masisitimu ehukama.
Mutengi kutsigira Citizenship nekudyara kweMoldova
Chikwata chedu che Citizenship neInvestment Agents eMoldova uye Citizenship ne Investment Lawyers zveMoldova inopa vatengi uye mhuri dzavo muMoldova nerutsigiro rwekuva mugari nekudyara kubva kuMoldova, kugara nekudyara kubva kuMoldova nemamwe mikana yekudyara yekubva kune dzimwe nyika, munyika makumi matatu nenomwe.
Masevhisi edu haangogumirwi ekugara nekudyara kubva kuMoldova kana Golden Visa kubva kuMoldova kana ugari nekudyara kubva kuMoldova kana pasipoti yechipiri, isu tinobatsirawo mune yakanakisa dzimba dzekudyara mikana kubva kuMoldova, ichipa mhinduro izere kana iwe uchida kutanga kambani mu Moldova kana kumahombekombe, zviwanikwa zvevanhu muMoldova uye nezvimwe zvakawanda, izvo zvinosanganisira kuronga zvemari nezvimwe zvakawanda.
Kubatsira vatengi vedu nehugari-hwakavakirwa mhinduro mukati uye kubva kuMoldova nekugara kwechipiri.
Rutsigiro Rwakakosha rwevagari vemuMoldova:
Isu tinopa zvinodhura Citizenship nekudyara mabasa yeMoldova, kuburikidza neyedu inokwanisika mari yekudyara uye yekufambisa mutemo yeMoldova, inokwanisika mari yekushambadzira vanokumbira kuMoldova, Citizenship inodhura nevanoona nezvekudyara kuMoldova, Citizenship inokwanisika nemagweta ekudyara eMoldova uye yakasimba inowona nezvekupinda munyika yekuMoldova
Ugari nekudyara kubva kuMoldova kuenda ku37 Nyika.
Ndarama vhiza muMoldova kuenda ku37 Nyika.
Yechipiri pasipoti kubva kuMoldova kuenda ku37 Nyika.
Bhizinesi Kubva kune dzimwe nyika kubva kuMoldova kuenda ku106 Nyika.
Ugari nemapurogiramu ekudyara kubva kuMoldova.
Goridhe visa zvirongwa muMoldova kuenda ku37 Nyika.
Ugari nemapurogiramu ekudyara kubva kuMoldova kuenda ku37 Nyika.
Chechipiri pasipoti zvirongwa kubva kuMoldova kuenda ku37 Nyika.
Mapurogiramu ebhizinesi ekupinda munyika kubva kuMoldova kuenda ku106 Nyika.
Ugari neInvestment yeMoldova kuburikidza neReal Estate
Isu tinopa rutsigiro rwezvivakwa zvekudyara zvivakwa muMoldova nemaonero ekuti mutengi anofanirwa kuwana kudzoka kwakanaka pane kudyara muMoldova, chero nguva, pavanoda kusarudza kubva mukudyara kwavakaitwa nehukama hwavo nekudyara kweMoldova. Isu tinosungirirwa nevashoma varidzi venzvimbo muMoldova vane mbiri yakanaka uye yavo midziyo iri munzvimbo dzakanaka muMoldova, vachitora kudzoka kwakanakisa.
Akanakisa edzimba dzimba dzekugara zvirongwa zveMoldova nekudyara muzvivakwa muMoldova.
Unoda kuziva - Moldova Citizenship neInvestment
Citizenship neInvestment Gweta reMoldova ichapa zvakadzama zvinyorwa zvinyorwa kune yako yakabudirira Citizenship nekudyara kuMoldova. Yedu standard masevhisi e Citizenship neInvestment kuMoldova inosanganisira:
Magweta edu anonzwisisa zvaunoda kuti utamire kubva kuMoldova kana kuenda kuMoldova, zvichibva nekuti ndeapi mazano angaitwa
Isu tinotungamira Kwekutanga Kukoshesa Kushingairira, kugadzirira mushumo usati wakurudzira Citizenship nekudyara kweMoldova kune vatengi kuti vawane Citizenship yeMoldova uye kudzikisa njodzi yekuramba.
Zvichienderana neyakafanira kushingairira mushumo weMoldova, isu tinokurudzirawo mamwe mapurogiramu ekubudirira kuri nani.
Kuti isu tifambire mberi nehukama hwako nechikumbiro chekudyara kuMoldova isu taizoda makopi akaongororwa evatengi nenhengo dzemhuri pasipoti.
Dudziro uye apostile emagwaro Ugari nekudyara kunyorera Moldova. Magweta edu akasarudzika e Citizenship nekudyara kweMoldova uye vhiza yegoridhe inobatsira nekuzadza mafomu uye zvinyorwa.
Kana yako uye yako yemhuri zvinyorwa zveCitizenship nekudyara kunyorera kuMoldova kwagadzirira, tichazvizadza nezviremera zvine chekuita neMoldova.
Kamwe chikumbiro chako cheU Citizenship nekudyara kweMoldova chikatenderwa, tinogovana nhau dzakanaka newe uye totanga kugadzirira zvimwe zvinotsigirwa.
Isu hatitsigire kana kupa Citizenship neinvestment services muMoldova kune pazasi vanotaurwa Vanhu kana mabhizinesi muMoldova:
Citizenship nebasa rekudyara kuMoldova hadzisi kupihwa kune Vatengesi kana vanogovera zvombo uye mabara kubva kana kuMoldova.
Citizenship nezvirongwa zvekudyara kuMoldova hazvipi kupihwa kweTechnical kuongororwa muMoldova kana maindasitiri espionage ezvirongwa zvekudyara mukati kana kubva kana kuenda kuMoldova.
Citizenship nekutsvaga kwekudyara kweMoldova hadzipi kupihwa chero zvisiri pamutemo kana tsotsi zviitiko muMoldova.
Citizenship nerutsigiro rwekudyara zveMoldova hazvisi zvevanhu vanobata maGenetic zvinhu muMoldova.
Citizenship nebasa rekudyara kuMoldova haisi yemabhizimusi anotengesa zvombo zvine njodzi kana zvine ngozi zvebhagiriya kana zvombo zvenyukireya muMoldova.
Citizenship nechirongwa chekudyara rutsigiro rweMoldova haruwanikwe kune vanhu veMoldova vanobata mukutengesa, kuchengetedza muMoldova, kana kutakurwa kwenhengo dzeVanhu.
Citizenship nekudyara zveMoldova haisi yematare asiri pamutemo ekurera vana.
Citizenship zvirongwa zvebasa zveMoldova haisi yezvitendero uye masangano avo eMoldova.
Citizenship nebasa rekudyara mu Morodhovha haina kupihwa kune vanhu vari kuita Zvinonyadzisira muMoldova.
Ugari Hwedu magweta muMoldova haitsigire bhizinesi rekutengeserana nezvinodhaka muMoldova.
“Chiziviso Chakakosha : MM Solutions INC inotora chengetedzo inonzwisisika kunyatso gadza AML zvinyorwa zvevatengi veMoldova neKYC yavo asi isu hatigamuchire chero mutoro (s) wekuramba chero kupi zvako kubva kuzviremera muMoldova kubvumidzwa kwekunyorera Citizenship nekudyara muMoldova.
Ugari nekudyara muMoldova nedzimwe nyika, pamwe nezvimwe zvakawanda zvinotsigirwa.
Isu tinopa hukuru hwehukama nerutsigiro rwekudyara muMoldova kwekudyara, kutamira kune dzimwe nyika uye kuronga kwezvivakwa muMoldova.
Inotsigirwa nehukama hwepasi rose neyakaitika mari uye ruzivo rweMoldova, isu tinogadzira mhinduro dzakanakisa
Hwedu Hwehugari nevekudyara masevhisi eMoldova anopa mitengo yakachipa, iine chinzvimbo chinobudirira cheMoldova.
Isu takatora makore echiitiko kune hunyanzvi hwehukama kuMoldova inotsigira vatengi pamwe nemhuri dzavo kuMoldova.
Ruzivo rweHurumende nevekudyara vanokumbira kuMoldova nevamiriri vepamutemo veMoldova vachipa rutsigiro kune vatengi.
Tine akanakisa magweta nevamiriri veMoldova kubata maitiro uye kunyorera avo vakazvipira kubudirira kwako.
Usati uri Citizenship yeMoldova uye mushure mekubvumidzwa, nhengo yedu yechikwata chepamusoro yaizovapo yebhizinesi kana rutsigiro rwemunhu kuMoldova
Isu tine ruzivo rwepasi rese mu Citizenship nekudyara kusanganisira Moldova, kubatsira vatengi kubva kumativi ese epasi nemasevhisi akanakisa.
Muchiitiko icho, Citizenship yako nekudyara kuMoldova ikakundikana, kune dzimwe nyika makumi matatu nenomwe dzatinoshandira, isu takagadzirira nehurongwa B.
Verengai mutengo weCitizheni neInvestment kuMoldova
Kuti uverenge mutengo weCitizenship nekudyara kweMoldova ndapota zadza zvese zvese kusanganisira nhengo dzemhuri uye zera ravo. Nekuda kwenhamba huru yevatengi veMoldova, isu tinokwanisa kupa masevhisi ari nani nemutengo wakaderera. Kuverenga kuchasanganisira, kunosanganisira, mutengo weUgari nehurongwa hwekudyara kuMoldova uye zvimwe zvikwereti.
mhando vhiza zveMoldova
Maitiro Ekubvumidza Maitiro eMoldova
Kwekugara kwenguva pfupi muMoldova
Permanent Residence muMoldova
Embassies uye maMiriri eMoldova
Ugari neInvestment muMoldova uye Mamwe maSevhisi
Isu takanyora pasi mamwe mashoma masevhisi atinopa muMoldova nezvezvinoitika kana zvemberi zvinodiwa.
Kana iwe uri kuronga kutamira nemhuri yako kuMoldova nekudyara mari, isu semumwe wako kuMoldova, tiripo kuti tipe mamwe akawanda sevhisi uye uye kana paungangoda muMoldova nemitengo inodhura.
Kunze kweCitizenship nekutsvaga kwekudyara kweMoldova, isu tinopa bhizinesi, IT neHR masevhisi zvakare kuMoldova, ayo iwe ausingawane pasi peimwe amburera yakapihwa nevamwe vapi vamazano eMoldova vachitigadzira shopu yekumira imwechete yeMoldova nenyika 106.
"Isu takaisa makore ekuyedza uye pasi rose mu106 Nyika kubatsira mhuri, vanhu, uye bhizinesi kuMoldova mukuzadzisa zvinangwa nezvishuwo zvavo."
Isu tinotsigira nzira yemutengi wedu kupfuura Citizenship nekudyara kweMoldova nerubatsiro rwemagweta edu, vanachipangamazano uye kusunga muMoldova nepasi rese.
Tinogona kukubatsira kunyoresa kambani muMoldova kana Offshore uye 106 Nyika (Mari yekunyoresa kambani muMoldova inodhura nesu.)
Akaundi yeBhangi muMoldova
Chero musimari anotamira kuMoldova angangoda account yako yebhangi muMoldova uye account yebhangi yekambani muMoldova, isu tinogona zvakare kubatsira nemaoffshore bank account.
Payment gedhi muMoldova
Kana iwe uchida kubvunza muMoldova, ye dhijitari yekubhadhara mhinduro muMoldova senge yechinyakare kana fintech yekubhadhara gedhi muMoldova kana crypto mhinduro, tizivise.
Mushure meCitizenship nekudyara ku Moldova kana iwe uchironga ku tanga bhizinesi nekutenga ravepo bhizinesi muMoldova kutanga pakarepo muMoldova.
HR Services muMoldova
Our kambani yevashandi muMoldova inogona kukubatsira nekukurumidza kutora vanhu. Iwe unogona zvakare kutumira nzvimbo muMoldova vakasununguka.
Nhamba Dzenhare dzeMoldova
Masisitimu efoni ebhizinesi eMoldova pamwe ne nhamba dzeMoldova Nyika 102 uye Maguta 291.
Zvemari Kuronga Services muMoldova
Accounting, kushingairira kwakakodzera muMoldova uye zvakawanda.
Virtual Hofisi Kero muMoldova
Setup bhizinesi muMoldova
Mushure meCitizenship nekudyara kuMoldova, setup bhizinesi mu Morodhovha.
Isu tinopa pazasi kutaurwa IT mhinduro muMoldova
Kugadzira Webhu muMoldova
Ecommerce Kuvandudza muMoldova
Webhu kuvandudza muMoldova
Kuvandudza kweBlockchain muMoldova
App Kubudirira muMoldova
Software Kubudirira muMoldova
Magweta e Citizenship neInvestment muMoldova
Isu tinopa Citizenship yepamutemo neInvestment mhinduro dzeMoldova uye kubudirira kwevatengi vedu kwakakosha, kuMoldova, isu tiri vatungamiriri, kambani yedu yemutemo yeMoldova ine vamiririri vekupinda zvakanaka muMoldova, isu tine mukurumbira wekuburitsa yakanakisa vatengi kushandira ruzivo rweMoldova ne kujekesa sarudzo dzekudyara mhinduro dzeMoldova vanhu pamwe nemhuri dzavo. Hedu Citizenship neinvestment timu yeMoldova inopa zvakagadzirwa mhinduro dzekubudirira kweiye Mutengi.
Nhengo dzemhuri yako (vana, mukadzi, vabereki) vanokodzera kupihwa mvumo yekugara kuMoldova, pane mvumo yekugara muMoldova yabvumidzwa.
Simba regweta reMoldova rinodikanwa kune ese matanho epamutemo pachinzvimbo chako ne Citizenship nevamiriri vezvekudyara muMoldova. Kana iwe uri muMoldova kana waronga kushanyira Moldova, tinogona kuwana simba rako regweta pano.
Isu hatibhadhare yakawedzera yekuwana Simba regweta. Kana iwe uchironga kutanga kunyoreswa kwekambani kweMoldova nechokure, simba rako regweta rinofanira kuve rakanyoreswa zviri pamutemo kuti rishandiswe mudunhu reMoldova. Zvichienderana nenyika yaunogara, inofanirwa kuve yakatendeka kana kubvumidzwa nemumiriri weMoldova.
Inowanzo Bvunzwa Mibvunzo - Ugari neInvestment muMoldova
Ndeipi tsananguro yekugara nekudyara muMoldova?
Kugara nekudyara kuMoldova, kunogona kutsanangurwa sekuti, kuwana ugaro hweMoldova kuburikidza nekudyara muhupfumi hweMoldova kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, bhizinesi, zvivakwa, zvisungo zvehurumende, nezvimwe. Nyorera kuti ugare nekudyara kuMoldova, ugare nehurongwa hwekudyara kuMoldova inotsigirwa nekugara nenzvimbo dzekudyara kuMoldova, kuburikidza nekugara kwedu kwakanakisa nemagweta ekudyara muMoldova, kugara kwakanyanya nemagweta ekudyara muMoldova uye kugaramo kwakanakisa nevarairidzi vezvekudyara kuMoldova, kushanda pekugara zvakanakisa nevamiriri vezvekudyara muMoldova, uye mafemu akanakisa ekuona nezvekupinda munyika. muMoldova.
Kugara nemabasa ekudyara mari kuMoldova | Kugara nevamiriri vezvekudyara muMoldova | Kugara patsva nemagweta eInvestment muMoldova | Kugara nemagweta ekudyara muMoldova | Kugara nevanoona nezvekudyara kuMoldova
Ndeipi tsanangudzo yekuva mugari nekudyara muMoldova?
Ugari nekudyara kuMoldova, kunogona kutsanangurwa sekuwana ugari hweMoldova kuburikidza nekudyara muhupfumi hweMoldova kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, bhizinesi, zvivakwa, zvisungo zvehurumende, nezvimwe muMoldova. Nyorera kuva mugari wemo nekudyara kuMoldova, ugari hwemo nehurongwa hwekudyara kuMoldova inotsigirwa nehugari nehumambo hwekudyara kuMoldova, kuburikidza nehukama hwedu hwakanakisisa nemagweta ekudyara muMoldova, kuva mugari wepamusoro nemagweta ekudyara muMoldova uye kuva mugari wepamusoro nevanoona nezvekudyara kuMoldova, vachishanda kuva mugari wakanakisa nevamiririri vezvekudyara muMoldova, uye akanakisa mafemu ekuona nezvekupinda munyika.
Affordable Investor yekufambisa mabasa eMoldova | Vanodhura vanoenda kune dzimwe nyika vanokumbira kuMoldova | Vanodhura varidzi vemari vanoenda kune dzimwe nyika muMoldova | Vanodhura varidzi vekupinda munyika magweta muMoldova | Vanodhura varimi vanoona nezvekupinda kune dzimwe nyika kuMoldova | Affordable immigration law firms kuMoldova
Ndeipi tsananguro yepasipoti yechipiri muMoldova?
Yechipiri pasipoti muMoldova, inogona kutsanangurwa sekuwana mugari wepamutemo weMoldova kuburikidza nekudyara muhupfumi hweMoldova kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, zvivakwa, bhizinesi, zvisungo zvehurumende, nezvimwe. Nyorera pasipoti yechipiri kuMoldova, chirongwa chechipiri chepasipoti cheMoldova chinotsigirwa wechipiri pasipoti masevhisi eMoldova, kuburikidza nemagweta edu epasipoti epasirese kuMoldova, magweta epasipoti epamusoro muMoldova uye akanakisa echipiri mapasipoti ekuMoldova, vachishanda pane vechipiri pasipoti vamiririri muMoldova, uye akanakisa mafemu ekuona nezvekupinda munyika muMoldova.
Chechipiri pasipoti masevhisi eMoldova | Chechipiri pasipoti vamiririri muMoldova | Yechipiri mapasipoti magweta muMoldova | Yechipiri mapasipoti magweta muMoldova | Chechipiri pasipoti vanopa mazano kuMoldova
Ndeipi tsananguro yegoridhe visa muMoldova?
Goridhe visa muMoldova, inogona kutsanangurwa sekuti, kuwana mvumo yekugara muMoldova kuburikidza nekudyara muhupfumi hweMoldova kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, zvisungo zvehurumende, bhizinesi, zvivakwa, nezvimwe. Nyorera vhiza yegoridhe kuMoldova, chirongwa chendarama vhiza yeMoldova inotsigirwa goridhe vhiza masevhisi eMoldova, kuburikidza neyedu akanakisa egoridhe vhiza magweta muMoldova, akanakisa egoridhe vhiza magweta muMoldova uye akanakisa endarama vhiza varairidzi veMoldova, vachishanda pane akanakisa egoridhe vhiza vamiririri muMoldova, uye akanakisa ekupinda kwevanoona mafemu muMoldova.
Goridhe vhiza masevhisi eMoldova | Goridhe vhiza vamiririri muMoldova | Magoridhe egweta magweta muMoldova | Magoridhe vhiza magweta muMoldova | Goridhe vhiza varairidzi veMoldova
Ndechipi chiri chidiki chekudyara kweCitizenship nekudyara muMoldova?
Kashoma kudyara kweCitizenship nekudyara muMoldova iri EUR 100,000.
Iwe unopa rubatsiro rwepamutemo kuMoldova rweCitizenship nekudyara?
Ehe, gweta redu muMoldova nevamiriri muMoldova vanopa rutsigiro rweCitizenship nekudyara muMoldova.
Ugari neInvestment kuMoldova inodhura?
Mutengo weCitizenship neInvestment kuMoldova uye Citizenship nemari inodiwa mari yeMoldova ndeye yakakwira mambure akakosha vanhu, isu tinobhadharisa chete kubhadharisa mari yeCitizenship neInvestment kuMoldova, isu tinopawo yakawanda zvimwe zvekutsigira Citizenship neInvestment mhinduro.
Ndeapi vagari venyika vanogona kunyorera Citizenship nekudyara kuMoldova kana investor visa kuMoldova?
Ugari nevekudyara masevhisi eanogona kushandiswa nevagari venyika chero ipi asi mienzaniso mishoma ndeye Citizenship nekudyara kuMoldova kubva kuAsia, Citizenship nekudyara kuMoldova kubva kuAfrica, Citizenship nekudyara kuMoldova kubva kuEurope, Citizenship nekudyara kuMoldova kubva kuSouth America, Citizenship nekudyara kuMoldova kubva kuMalaysia, Citizenship nekudyara kuMoldova kubva kuBangladesh, Citizenship nekudyara kuMoldova kubva kuIndonesia, Citizenship nekudyara kuMoldova kubva kuSri Lanka, Citizenship nekudyara kuMoldova kubva kuNepal, Citizenship nekudyara kuMoldova kubva kuIndia uye Citizenship nekudyara kuMoldova kubva kuUAE.
Hugari hwehunyanzvi neInvestment Guidance zveMoldova
Kumbira kubvunza Mahara kwehukama hwako neInvestment kuMoldova
Mazwi akakosha mu Citizenship neInvestment yeMoldova
Chikoro cheRuzhinji rweKutonga
National Bureau of Statistics yeRepublic yeMoldova
National State Agency Zvimiro
World Bank muRepublic of Moldova
Dare reAccounts eRepublic of Moldova
Rwepamutemo rewebhu reParamende Republic yeMoldova
Yepamutemo peji rewebhu reChamber of Commerce neindasitiri yeRepublic yeMoldova
Mutemo weRepublic of Moldova
Gurukota rinoratidzira reRepublic of Moldova
Superior Council yeMagistrates
National Bank yeMoldova
Constitutional Court Dare reRepublic of Moldova
International Monetary Fund muRepublic of Moldova
Rwepamutemo rewebhu rehurumende yeRepublic of Moldova
Center for Human Rights yeRepublic yeMoldova
Tourism Agency yeRepublic yeMoldova
OSCE Mission muRepublic yeMoldova
Moldovan Investment uye Export kukurudzira Sangano
Rwepamutemo rewebhu reChikoro cheScience cheMoldova
United Nations Sangano muRepublic yeMoldova
Rwepamutemo rewebhu reRepublic of Moldova
United Nations Development Program muRepublic of Moldova
Veruzhinji Vashandi Portal
Dare Guru reJustice reRepublic of Moldova
Link to Dhipatimendi Rekupinda kweMoldova , Inotarisira kuumba marongero ekuchimbidza Immigration muMoldova